Ny tsimokaretina tsinay (rotavirus, bakteria, pilina) - ny soritr'aretina, ny fitsaboana. Famaranana ny tsindrona amin'ny tsinay
Ny tsimokaretina amin'ny tsinay - karazana sy fomba fitsaboana tsara indrindra
Koa satria ny tsina dia tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana sakafo avy amin'ny sakafo sy ny famindrana azy amin'ny rà, dia miteraka fahasimbana amin'ny fahasalamana sy olana amin'ny asan'ny taova hafa ny aretin'io osy io. Ny aretina azo avy amin'ny gastrointestinal dia mampidi-doza izay mitaky fitsaboana sy fitsaboana.
Ny tsindrona amin'ny tsina - karazana
Na dia mety ho samy hafa ny antony mahatonga ny tsimok'aretina tsimokaretina aza, dia mety ho zaraina amin'ny vondrona lehibe telo izy rehetra:
Famaritana virosy. Ny mpandidy ilay aretina dia virosy izay nateraky ny ranomandry. Ny otrikaretina virosy dia vokatry ny aretina am-polony am-polony, ka ny mahazatra indrindra dia: rotavirus , enterovirus, adenovirus.
Bakterial infections. Ity karazana aretina ity dia voan'ny aretin-tsaina toy ny E. coli , salmonella , dysentery rod, staphylococcus. Ny bakteria dia miditra amin'ny vatan'ny olona miaraka amin'ny vokatra voapoizina na amin'ny tanana maloto.
Fanasitranana fay. Ny mpandidy ilay aretina dia ilay holatra candida.
Fanafody fanindroany amin'ny tsinay
Ny bakteria intestinal sy ny tsimok'aretina virtoaly dia ampitaina amin'ny ranomandry eny an-dalambe, fa ny trangan-javatra amin'ny aretina amin'ny tanana maloto na sakafo dia tsy mahazatra. Ny aretina amin'ny aretina toy izany dia sarotra noho ny fitoviana amin'ny hatsiaka. Ny olona dia miakatra ny mari-pana, misy ny fahalemena, ny orona mihazakazaka, ny tavy, ny tendany. Noho izany antony izany, ny tsimokaretina viraty virosy dia antsoina koa hoe gripa intestina .
Ny tsindrona amin'ny tsindry amin'ny rotavirus, toy ny aretina hafa amin'ny tsinain'ny viriosy, dia tsy mitovy amin'ny mangatsiaka sy ny gripa noho ny fisian'ny soritr'aretina. Ny roa na telo andro aorian'ny fitsaboana, ny marary dia manatsara ny aretim-pivalanana, ny fery, ny fanaintainana eo amin'ny vavony na ny tsinay, ary ny fihenan'ny alahelony. Mandritra io vanim-potoana io, ny aretina dia tena mifindra, ka tokony horaisin'ny olona ny fitandremana.
Ny tsindrona bakteria amin'ny tsinay
Ny bakteria amin'ny aretina dia miditra amin'ny vatan'ny olona miaraka amin'ny vokatra maloto na maloto, amin'ny tanana maloto, sakafo sy zavatra hafa. Ny tsimokaretina amin'ny tsimokaretina amin'ny tsimokaretina bakteria dia miteraka kokoa noho ny virosy viraty viraty ary mampitombo ny fahasarotana. Ny olana amin'ny fitsaboana ireo aretina ireo dia ny ankamaroan'ny bakteria ao amin'ny tsinay dia miova haingana amin'ny antibiotika ary tsy mamaly azy ireo.
Iray amin'ireo otrikaretina bakteria mahazatra indrindra ao amin'ny rafi-pandaminana ny stafylococcale ny tsinay. Mipetraka ao amin'ny vatan'ny olona foana ny staphylococcus, saingy amin'ny isa voafetra ihany. Ny fihenan'ny tsy fahampiana sy ny fidirana amin'ny bakteria avy amin'ny staphylococcus dia mety hitarika aretina matotra izay mandroso haingana ary sarotra ny mitondra.
Fanafody fanosotra ny tsinay
Ny fiantraikan'ny pilina amin'ny tsinay dia misy fiantraikany amin'ny mikrôba amin'io taova io ary miteraka fiovana mitranga eo amin'ny sehatry ny digestive. Ny loharanom-pahalalana fototra amin'ity aretina ity dia candida. Ny soritr'aretina sy ny fandehan'ny aretina dia miankina amin'ny endriky ny aretina:
Kandidà tsy manan-kery. Ny soritr'aretin'ity aretina ity dia ny aretin-tsika sy ny fery amin'ny hoditra.
Kandidà. Miely any amin'ny taova hafa ny aretina, ka miteraka aretina lehibe.
Ny tsindrona amin'ny tsinay - soritr'aretina
Raha misy olona mitondra tsimok'aretina ao amin'ny tsinay, dia ny fisehoan'ny aretina:
Aretina mahatsiravina amin'ny tsinay. Ny fangirifiriana ao amin'ny kibon'ny akanjony dia manjavona ary maharitra mandritra ny minitra maromaro.
Aretim-pivalanana. Ny fahasamihafana amin'ny trano dia mety ho toetra hafa. Amin'ny aretim-panoanana tsy misy ala, tokony handeha any amin'ny hopitaly ianao, satria mety hiteraka fahafatesana ny fandotoana.
Miala tsiny sy mandoa. Ny tsy fahampian-tsakafo tsy azo ihodivirana dia mampidi-doza toy ny aretim-pivalanana tsy azo ihodivirana, satria manala ny rano ilaina amin'ny vatany.
Temperatila avo. Miaraka amin'ny aretina mafy dia mety hijanona amin'ny isa maromaro mandritra ny andro maromaro ny mari-pana.
Fahalemena. Ity soritr'aretina ity dia vokatry ny tsy fahampian-tsakafo, tsy fahampian-tsakafo ary tazo mahery.
Ny hoditra manala, manifikifika. Ity soritr'aretina ity dia mampiavaka ny karazana tsindrona amin'ny tsinay: aretin'ny enterovirus sy diozy.
Aretina amin'ny taratasy mivalona
Ny areti-mifindra intestinal dia miteraka aretina ao amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal. Mijanona tsy miasa tanteraka ny vavony, vokatr'izany dia misy alahelo sy fanaintainana eo amin'ny vavony, ny fikajiana, ny fiterahana. Ny peristalsis ao amin'ny tsina dia simbatra, mitombo ny fitomboan'ny fitomboan'ny gaza, ny fihenanam-po na ny aretim-pivalanana. Ireo soritr'aretina ireo dia hiseho amin'ny fomba iray na sasany mandra-pandresena ilay aretina.
Aretina amin'ny tsindrona entina
Ny marika famantarana ny tsimok'aretina dia manomboka maneho ny tenany amin'ny andro faharoan'ny aretina. Anisan'ny famantarana voalohany ny aretina ny hafanana ambony. Miaraka amin'ny tsindrona amin'ny tsina dia mihamitombo isa ny mari-pana ary mihazona azy mandritra ny andro maromaro. Matetika ny hafanana dia mijanona eo amin'ny 38-38,5 degre. Ny mpitsabo dia manoro hevitra ny mandondom-baravarana toy izany amin'ny fanafody antipiretika mba hisorohana ny fahaverezan'ny voina.
Mitabataba amin'ny tsindrona entina
Ny aretina vokatry ny tsinay, vokatry ny enterovirus, dia miaraka amin'ny soritr'aretina tsy mahazatra amin'ny aretina ao amin'ny tsindry: fofona. Ny fipoahan'ny hoditra dia mety ho hita ao amin'ny toerana iray amin'ny vatany na mandrakotra tapany lehibe amin'ny hoditra. Voalohany, voakasika ny hoditra. Avy eo ny soritr'aretin'ny aretina dia manatevina ny fery: ny tazo mahery, ny fanatsarana ny lymph, ny fahalemena, ny alahelon'ny trakta ao amin'ny gastrointestinal. Mety hisy fiantraikany goavana io karazana aretina io, noho izany, ny fitsaboana ny aretina enterovirus dia tsara kokoa any amin'ny hopitaly.
Fanadihadiana momba ny tsindrona amin'ny tsinay
Ny famakafakana ny vatana sy ny ra dia manampy amin'ny famaritana hoe inona avy amin'ny virosy ao amin'ny tsinay no tratran'ny aretina. Noho izany, afaka misafidy fanafody mahomby amin'ity tranga ity ny dokotera. Tsy azo ampiasaina ny alikaola, ny antibiôtika sy ny laxatives, alohan'ny handehanana amin'ny fanadihadiana ny trano fivoahana. Ny fanadihadiana momba ny tsimokaretina ho an'ny tsimok'aretina tsinay dia atao mandritra ny dimy andro, noho izany, amin'ny andro voalohan'ny aretina, ny dokotera dia mametraka fanafody, mifototra amin'ireo soritr'aretina voalaza.
Fanasitranana tsina - fitsaboana
Ny tsimokaretina amin'ny tsinay dia aretina mifindra, ka noho izany, mandritra ny fitsaboana azy, dia tokony hijanona amin'ny marary ny marary. Ny dokotera dia manolotra fomba toy izany toy ny fitondràna ny tsindrona amin'ny tsinay:
Hanoanana tanteraka, ary raha tsy misy izany - sakafo matavy.
Ny fampiasana zava-mahadomelina indray.
Fitsaboana ny soritr'aretina: tazo, aretim-pivalanana, fery.
Miala sasatra. Hatramin'ny nisian'ny hanoanana ny marary dia ho tsapany fa malemy sy marary mafy izy. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia mila mandaitra bebe kokoa ny marary.
Misotroa rano madio.
Medication for infection intestinal
Mba hanaovana fanafody amin'ny tsinay dia ampiasaina ireto fanafody ireto:
Fanomanana fametahana: Regidron, Trisol. Ny aretim-pivalanana sy ny fitefena dia mitarika ny fahaverezan'ny rano sy ny sira ilaina, ka ny vahaolana solika dia natao mba hihazonana ny fifandanjana sira eo amin'ny vatana. Ny vahaolana solika dia afaka miomana amin'ny tenanao manokana.
Miaraka amin'ny aretim-pivalanana mahery vaika sy ny fiterahana, ny dokotera dia manintona ny fitsaboana amin'ny glucose sy ny chloride.
Fampiasana sorbents: Polysorb, Smecta, Enterosgel, Atoxil. Ireo tabilao avy amin'ny tsindrin'ny tsinay dia manampy amin'ny fanadiovana ny vatana amin'ny vokatra decay sy ny zavatra mampidi-doza izay miforona eo ambany fiantraikan'ny viriosy.
Ny antibiotika amin'ny tsindrona amin'ny tsinay dia manampy amin'ny fanatanterahana mivantana ny bakteria. Ny dokotera dia afaka mandefa antibiôtika alohan'ny hanaovana famakafakana mba tsy handany fotoana. Amin'ny alàlan'ny valin'ny fandalinana dia azo havaozina ny antibiotika. Ny antibiotika dia mahomby amin'ny aretina: Ofloxacin, Norfloxacin, Ciprofloxacin, Doxycycline, Levomycetin, Metronidazole.
Fitsaboana amin'ny fanaraha-maso ny diarrhea: Loperamide , Ftalazol, Imodium, Furazolidone.
Fanafody fampihenana ny hafanana: Nurofen, Paracetamol, Analgin.
Antiemetic dia ampiasaina amin'ny tsy fahampian-tsakafo: Cerucal. Raha mando matetika ianao, dia tsy maintsy mampiditra tsimokaretina ny zava-mahadomelina.
Famokarana enzymika ho an'ny tsindrona entina: Pancreatin, Mezim, Festal, Creon, Licrease. Manomboka mihinana izy ireo rehefa nesorina ny soritr'aretina.
Fitsaboana ny tsindrona amin'ny tsinay amin'ny fanafodin'ny volokano
Ny tsindrona ny tsinay, ny fitsaboana sy ny fanarenana aorian'ny aretina, dia henjana sy tsy mahomby raha tsy manara-maso ny sakafo ny marary ary mitazona ny fahasalaman'ny rano amin'ny sira. Hanampy ireo karazan-karazan-tsakafo toy izany ny fampihenana ny fahasitranana:
Fampidirana marginal. Natao hanamaivanana ny soritr'aretina sy ny soritr'aretin'ny vavonin'ny vagao izany, ary hialan'ny diarrhea. Ho an'ny fanomanana azy 1 tbsp. Ny zavamaniry dia manondraka rano mangatsiaka ary manindry 2 ora. Misotro 150 ml alohan'ny hisakafo.
Famaritana ny fototry ny aira. Hanampy amin'ny aretim-pivalanana, ny fahatsapana mampangirifiry, ny fiteran'ny tsinay. Mba hanaovana izany dia mila mofomamy 3 sotrokely. Ny fakan-tsolika dia manasitrana azy ireo mandritra ny antsasak'adiny amin'ny hafanana ambany amin'ny antsasa-litatry ny rano.
Saline solution. Manampy ny misoroka. Ampio rano misy vera 1 litatra ny rano. sira sy siramamy.
Fanesorana rameva. Manana toetra antiseptika izy, manampy amin'ny ady amin'ny bakteria mikorontana. Ho an'ny fanomanana azy 1 tbsp. Ny fitaovana maniry dia manondraka rano mangatsiaka ary mihazona antsasak'adiny ao anaty rano fandroana. Tokony hosotroina amin'ny rantsana kely ny ronono.
Inona no azonao ihinanana amin'ny tsindrona entina amin'ny tsinay?
Ny sakafo amin'ny tsindrona amin'ny tsina dia singa manan-danja amin'ny fitsaboana. Mba hanamaivanana ny fanarenana dia asaina manaraka ireto fitsipika ireto ianao:
Ny sakafo amin'ny trangan'ny tsindry: ny fandavana ny sakafo matsiro, voankazo, matevina, voatoto, mamy, ronono ary kobam-bary, legioma sy voankazo vaovao.
Ny menio dia tokony ahitana voankazo marefo, henan'alika, jelly, crackers.
Tokony hohanina izy io ary matetika.
Raha azo atao dia tokony misotro rano 2 minitra minitra iray isan'andro ianao.
Famerenana ny fiasana amin'ny tsinay taorian'ny aretina
Rehefa voan'ny tsindry ny tsinay dia mila averina amin'ny laoniny ny vatana. Io fotoana io dia mila roa herinandro. Mandritra izao fotoana izao dia araho ireto torohevitra ireto:
Tandremo ny fihinanana sakafo izay manelingelina ny rindrin'ny tranon-tsolika sy miteraka tsiranoka (ronono vaovao, vokatra avy amin'ny ronono, legumes, voankazo, legioma vaovao sy voankazo, mofomamy, nifoka, sakafo voatoto, kafe, dite, toaka ary tokony tsy hisy ny zava-pisotro. ary famokarana.).
Fampiasana enzymes : Mezim, Pancreatin, Festal, Creon, Licrease.
Famaranana ny tsindrona amin'ny tsinay
Ny tsindrona amin'ny virosin'ny tsinay dia mety hiverimberina raha tsy voamarina ireto fepetra manaraka ireto:
Ilaina ny manasa tànana matetika araka izay tratra.
Araho tsara ny hafanan'ny vokatra.
Aza misotro rano madio fotsiny.
Ny fitehirizana tsara ny sakafo ao amin'ny vata fampangatsiahana, amin'ny fijerena ny teny sy ny manodidina ny trano.
Raha ilaina dia mihinana amin'ny trano fialokalofana azo itokisana.
Fampidirana am-bohoka - famantarana
Decaris na Vermox - iza no tsara kokoa?
Noho ny fanararaotana amin'ny tendany maloto?
Fehikibo ortopedika ho an'ny hazavana lumbosacral
Glyoblastoma ao amin'ny atidoha - soritr'aretina
Fanairana - Antony
Pneumosclerose de ny havokavoka
Sakafo vita amin'ny lafarina
Makrôla ao amin'ny oven - recipe
Mofomamy ao amin'ny gorodona - inona no tokony harahina ary ahoana no ahafahana mamorona sary maoderina?
Toe ho an'ny orgasme
Raha nisy fianakaviana tanora iray nampijalijaly tamin'ny fanontaniana momba ny tsy fisian'ny ankizy, izany no navalin'izy ireo.
Ny Sarah Jessica Parker dia sambany vao nivoaka niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany
Tyrant lahy - famantarana
Ahoana no hahatonga ny lehilahy ho sambatra?
Ny vinaingitra balsama dia tsara sy ratsy
Ny zavakanton'ny ecstasy na ny soatoavin'i Cara Delevin
Oatmea fitaratra ho an'ny fahavoazana
50 amin'ireo biby sambatra indrindra eran'izao tontolo izao
Wedding amin'ny loko fuchsia
Clothes for katsina
Amin'ny firy taona no manomboka amin'ny alika ny estrus?